विश्वासको मत नपाए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ : ओली - Mahendranagar Post
Home राजनीति विश्वासको मत नपाए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ : ओली
विश्वासको मत नपाए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ : ओली
काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले आदेश दिए आफूले मार्गप्रशस्त गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले आफूले अस्थिरताका लागि नभइ स्थिरताका लागि विश्वासको मत मागेको बताए । ‘यो संसदले सुविचारित ढंगले निर्णय गरोस् । संसदले विश्वास गर्दैन भने मैले मार्गप्रशस्त गर्नैपर्छ’, ओलीले भने ।
उनले आफूलाई विश्वासको मत दिए प्रतिनिधिसभा फेरि विघटन नहुने उनले बताए।
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आफूलाई भोट नदिए संसद् विघटनतिर धकेलिने उनले चेतावनी दिए।
‘मलाई मत दिनुस्, कसरी संसद् विघटन हुन्छ ? आफैं मत नदिने, विघटनतिर धकेल्ने अनि दोष अरुलाई दिने ओलीले भने। उनले माओवादीले समर्थन दिएको प्रति व्यंग्य गर्दै भने, ‘दिँदै नदिएको समर्थन कसरी फिर्ता लिनुभो?’
उनले प्रतिपक्षी दलहरूलाई सोधे, ‘आफै भीरतिर हाम फाल्ने अनि गुरुत्वाकर्षणलाई दोष दिने? विश्वासको मत दिएर स्थिरताको पक्षमा काम गरौं,’ उनले संवाद र सहमतिका साथ अघि बढ्न बारम्बार भनिरहे।
उनले थपे, ‘मसँग बहुमत छ कसरी राजीनामा गर्ने मैले? सभा किन गर्यो भनेर भने। जनता कति आउँदा रैछन् भन्ने मैले त्यहीँ गरेर देखाइदिएँ। मान्छे हेर्न आऊ भने अनि मैले गएर देखाइदिएँ। त्यति मात्रै हो,’ ओलीले भने।
उनले संसद विघटन गर्ने आफ्नो षड्यन्त्र भए चकनाचुर गर्न पनि चुनाैती दिए। उनले अन्त्यमा संसदमा विश्वासको पक्षमा मतदान गर्न फेरि पनि आग्रह गरे।
Previous articleकैलालीमा सोमवार ८ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
Next articleधनगढीका व्यवसायी लम्सालको कोरोना संक्रमणका कारण काठमाडौंमा मृत्यु